"Israa'iil oo ku goodiday in ay dili doonto madaxweynaha Suuriya" - BBC News Somali
"Israa'iil oo ku goodiday in ay dili doonto madaxweynaha Suuriya"
Wasiir reer Israa'iil ah ayaa sheegay in ay meesha ka saaridoonaan xukuumadda Bashar Al Asad haddii ay ogolaato in Iiraan ay weerar kaga soo qaado ciidda Suuriya.
Yuval Steinitz ayaa ka digay in haddii weerar lagu soo qaado "ay waajib tahay in Asad uu ogaado in ay noqon doonto dhammaadkiisii iyo dhammaadka dawladdiisa".
Hadalkiisaas ayaa yimid iyadoo bartanka lagaga jiro warar sheegaya in masuuliyiinta Israa'iil ay qorshaynayaan in ay gantaallo ku weeraraan Iiraan ama gobahaa kale ee ay galaangalka ku leeyihiin.
Iiraan ayaa wacad ku martay in ay ka aarsan doonto weerarradii dhawaan lagu qaaday saldhigyada ay Suuriya ku leedahay kuwaas oo lala xiriiriyay Israa'iil.
Israa'iil ma aysan xaqiijinin mana aysan diidin in ay weerarradaas ka dambaysay, balse waxay sheegtay in ay horistaagi doonto wax ay u aragto "kobcinta" awoodda milatari ee ciidammada Iiraan ee Suuriya ku sugan.
Iiraan ayaa garabtaagnayd madaxweyne Bashaar al Asad toddobadii sano ee uu dagaalka sokeeye ku jiray, wuxuuna geeyay boqolaal la taliye oo dhanka milatariga ah iyo kumannaan malayshiyo ah.
Steinitz oo Isniintii waraysi siiyay wargeyska Yedioth Ahronoth ayaa sheegay in Israa'iil aysan farogalinin colaadda Suuriya ka taagan inkastoo Assad "uu dambi ka galay iyaga iyo dadkiisaba"
Maxamuud Cabbaas oo raaligalin siiyay dadka Yuhuudda
Yuhuudda Itoobiya oo dalbatay in Israa'iil la geeyo
Tuulo Suudaan ku taala oo ay u dalxiis tagaan basaasiinta Israa’iil!
Laakiin wasiirka tamarta ayaa ku goodiyay in "haddii Asad uu ogolaado in Iiraan ay adeegsato saldhig Suuriya ku yaalla ayna ka soo weerarto ciidda Suuriya in ay waajib tahay in uu markaas ogaado in ay noqon doonto dhammaadkiisa iyo dhammaadka dawladdiisa, isla markaasna uusan sii ahaan doonin hogaamiyaha Suuriya ama madaxweynaha Suuriya".
Alan Johnston oo BBC-da uga faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa sheegay in digniinta wasiirka looga golleeyahay in Israa'iil ay caddayso in Asad uu qaadi doono masuuliyadda weerarkii xadka Suuriya lagaga soo qaado.